राजनीतिक छम्मछम्ममा ओलीको वर्चश्व
एमाले पार्टीभित्रको राजनीतिको अगुवार्इ के.पी. ओलीको छम्मछमीमा नाचिरहेको आभास हुन्छ । गृह मन्त्रालय दिनुहुन्न, माओवादीसँगको सातबुँदे निरन्तरताको पालना हुनुपर्छ भन्ने आफ्‍नो एकल मान्यतालार्इ गुट बनाएर अगाडी लैजान के.पी. ओलीले जुनसुकै हतकण्डा अपनाउन पछि परेका छैनन । दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणमा जोड दिने ओलीको गुटबन्दीले नै नेपालको पछिल्लो राजनीति तताएको छ । हुनत एमालेका नेता खनालसँग सातबुँदे सहमति गरेर माओवादी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिको नयाँ इतिहास रच्ने प्रयास त गरेकै हुन्‍ तर पनि ओलीको राजनीतिले दाहालको राजनीतिलार्इ छायाँमा पारिदिएको छ । हिजोआज खै कुन्नि, नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली जता जाँदा पनि छमछमी राजनीति तालमा कम्मर मर्का नाचीरहेको देख्न पाइन्छ । के गर्नु हरे, तपार्इको पनि इच्छा ओली नेताज्यू सँग कम्मर मर्काउने धोको छ भने ओली ज्यू जाने कार्यक्रममा जानुहोस्‍ होइन भने बल्खु दरबारमा नै छमछमी रात्री भोजको आयोजना गर्नतफ लाग्नुहोस् अनि पाइन्छ मज्जा ओलीसँगको कम्मरे दौतरी नाच्दाको अनुभव । आजकल खै के हो कुन्नि काठमाडौ.को निर्जीव धरहराले पनि ओलीसँग नाच्ने र्इच्छा व्यक्त गरेको नेपाल समाचारपत्रको धरहराबाट भन्ने स्तम्भ लेखले उजागार गरिदिएको छ । बिचरा धरहरा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले यसैलार्इ निम्तो मानी कमरेड ओली ज्यू को सवारी धरहरातिरै हुने हो कमी ? अर्कौ कुरा नाच्नमा माहीर प्रचण्डलार्इ ओलीको समीपमा पुर्‍याउन पाए पनि हुने हो । दुर्इ जनाको कम्मरे जोडीको ताल कति हल्लने थियो होला । प्रचण्डको कम्मरे ताल साँच्चै अभिनेत रेखा थापाको कम्मरलार्इ धौ धौ परेको थियो । तालमा ताल मिलाउन । दक्षिपन्थी कम्मरको ताल बामपन्थी कम्मरमा नमिल्ने होला, नत्र त यो पनि कमरेड केपीसँग गएर छमछमी नाचिसक्थ्यो। हुनत :एनेकपा माओवादी का अध्यक्ष प्रचण्ड एकपटक रेखा थापासँग नाच्दा कमरेड ओलीले तीखो व्यङ्ग्य गर्नुभएको याद कायमै होला नी। तर अहिले त कमरेड ओली नै प्रचण्ड एकपटक नाच्छन् भने म दुईपटक वा सोभन्दा बढी पटक किन नाच्न नसक्ने (भन्दै जता जाँदा पनि नाचेको देख्न थालेको छ।आफू पनि नाच्ने अरुलाई पनि नचाउने कमरेड ओलीको शैली देखेर अब केही हुन्छ कि रु भन्ने आशामा परेको छ।केही हुने आँट देखेर नै होला ओली कमरेड महिला तथा सज्जनवृन्द देख्नासाथै हात समातेर नाच्न पल्कनुभएको। नाच्नको सामीप्यताको अर्थ खोज्दा गहिरार्इ भेटिन्छ । त्यसैले ओली कमरेडको राजनीतिक नचार्इ यात्रा अगाडी बढेको अनुमान लगाउनमै वेश होला ।
गुलाफको फूल भित्र लुकेको भ्यालेन्टाइन
विश्वभर १४ फेब्रुअरीको दिनलार्इ प्रेमी प्रेमीकाको स्पेसल दिन मानिन्छ । प्रेमी प्रेमीका भइसकेका लागि यो दिन प्रेम सम्बन्धलार्इ सुमधुर र प्रगाढ बनाउने दिन हो नयाँ प्रेम जोडी कस्नेहरुका लागि यो दिन प्रेम अवसरको प्रतीक हो । सन् २०११ को भ्यालेन्टाइन डे पनि आजै हो । विश्वभर प्रेमीजोडीहरुले सुखद जीवनका लागि यो दिन प्रेममय भावनाहरु साटासाट गरिरहेका छन्।
सौराह भ्यालेन्टाइन गन्तव्य प्रेम जोडी रम्ने दिन अर्थात १४ फेब्रुअरी भोलिको दिन हो । आफ्‍नो प्रेमजोडीलार्इ थप प्रेममय बनाउन प्रेमजोडीहरु रमाइलो र एकान्त ठाउँ रोज्ने गर्दछन्‍ तर आजभोलि बढ्‍दो प्रेम जोडीहरु कारण्ाले उपयुक्त पार्कस्थल वा डेटिगस्थलको खोजीमा नै भौतारिनुपनर्े भएको छ, प्रेमजोडीहरुका लागि गार्‍हो त नयाँ प्रेमजोडीहरुका लागि हो, भ्यालेन्टाइन डे मा कुन एकान्तमा गएर आफ्‍नो प्रेमको खुलासा गर्नै भनेर, नेपालका लागि प्रेमजोडीहरु रम्ने थुप्रै स्थलहरु छन्‍ । जसमा चितवनको सौराह अहिले प्रेमजोडीको आकर्ष्क स्थल बन्दै गइरहेको छ । भ्यालेन्टाईन जोडीलाई केही नयाँ दिने सोचमा हुनुहुन्छ भने सौराहा तपाँईका लागि कुरिरहेको छ। १४ फेबु्रअरी अर्थात भ्यालेन्टाईन डे—का दिन सौराहा आउने जोडीले लभ गिफ्ट पाउनेछन्। आफ्नो मायालु र आफु समेत लभगिफ्टको भागिदार हुने मौका जोडीहरुले पाउनेछन् सौराहामा। त्यसैले कहाँ जाने भनेर नअल्मिलिई मायालुसँग सुटुक्क सौराहा नै आईहाल्नुस र पाउनुस उत्कृष्ट जोडीको उपाधी सहित लभ गिफ्ट। उक्त दिन सौराहा रहने जोडीहरुको मूल्यांकन गर्न पर्यटन व्यवसायिहरुले गोप्य समिती नै परिचालित हुँदैछन्। जोडीहरु कसरी आउछन् ,एकअर्काप्रति कत्तिको विश्वस्त छन् ,बिबाह गरेको भए सम्बन्ध कस्तो छ ,आफ्नो जोडीसँग कतिको समय विताउछन् र उसका लागि कत्तिको खर्च गर्छन लगायतका विषयमा समितीले गोप्य मूल्याकंन गर्नेछन्। सौराहामा विताएका उनीहरुको क्षणहरुको गोप्य विष्लेषण गरि उत्कृष्ट जोडी घोषणा गरिने क्षेत्रिय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष शंकर शैंजुले भने। देशकै तेस्रो पर्यटकिय गन्तब्य सौराहामा पर्यटन वर्षको शुरुवातसँगै पर्यटक पनि बढ्दो छ। 'केहीसमय अघिसम्म आन्तरिक पर्यटक बढी थिए अहिले दुबै बराबरजस्तै छ' ,उनले थपे। सौराहा आउने भ्यालेन्टाईन जोडीहरुले हत्ती सफरी,डुंगा सफारी,बीच सफारी र सूर्यास्तको अद्यावधिक प्याकेजमा पनि सहभागीता जनाउन पाउनेछन्।भ्यालेन्टाईन डे—मा सौराहा आउने प्रेमी जोडीहरुले रमाइलो मात्र होईन खानाको विशेष मजा लिन पाउनेछन्। सौराहामा हुने वृहत सडक फुडफेस्टीवलमा उनीहरुले चौरासी व्यञ्जन पचासी स्वाद चाख्ने अवसर पाउने भएका हुन्।भ्यालेन्टाईन डे—को अवसरमा फुड फेस्टीवलमा स्वदेशी विदेशी पर्यटकलाई सौराहा आउन पर्यटन व्यवसायिहरुले चुले निम्तो दिएको छ । फुडफेस्टीवलसँगै पर्यटकका लागि सौराहाका होटलहरु आकर्षक रुपले सजिसजाउ बनाइएको छ। त्यस्तै पाँच दर्जन बढी रेष्टुरेन्ट र बारहरुले पनि पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छन्। सौराह पर्यटकीय स्थलसँगै यो क्षोत्रमा रहेका व्यवसायीहरुको भ्यालेन्टाइन डे स्पेसल प्याकेज प्रेमजोडीहरका लागि प्रेममय भावना बाँड्‍ने, साट्‍ने र रम्ने अवसरको रुपमा...
वातावरणको महत्व र हेपाहा प्रवृत्ति
लोडसेडिङको उपलब्धि महिमा
शहरमा अहिले केहीको चर्चा छ भने लोडसेडिङको चर्चा अग्रपंक्तिमा छ । विद्यार्थी भेट भए लोडसेडिङको चर्चा, पढ्न खोजेपनि लोडसेडिङले पढ्न नपाएको गुनासो । सरकारी क्याम्पसमा गयो, पढ्न कक्षामा बस्यो, बत्ती छैन, चिया खाएर गफ गर्न बस्यो । फोटोकपी गर्न गयो लाइन छैन भनेर घाम ताप्दै पर्खेर बस्यो ।
कार्यालयमा गयो, जेनेरेटर बिग्रेर विद्युत आउने समय पर्खेर बस्यो । घरमा टिभी हेर्छु भन्यो, मनै नपर्ने कार्यक्रम हेर्ने समयमा पर्नु, रेडियोमा कसैले कुरा गर्‍यो कि, लोडसेडिङ भएको हुनाले केही गर्न नपाएको कुरा । जहाँभएपनि जसरी भएपनि उही अँध्यारो । कहिल्यै कुरा उठ्न नचाहने अरुण तेस्रो आयोजनाका कुरा यहीबेला उठ्छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जाका गफ यही बेला हुन्छन् । वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेर यही बेलामा गफ हुन्छन् धेरै । मन्त्रीहरुदेखि लिएर एनजीओहरुले यहीबेला कुरा गर्छन् धेरै । काम गर्नुपर्ने बेला त यही सुख्खा याममै हो नि । तर के गर्नु लोडसेडिङको चर्चा बाहेक केही पनि छैन । केवल सरकार र नेताहरुलाई सराप्ने । विद्युत प्राधिकरणले भन्छ योजनाअनुसार काम भएमा ६ वर्षमा विद्युत समस्या हट्छ, तर यस्ता केही आविष्कारक भेटिएका छन्, जस्ले यो विद्युत समस्या छिटै हटाउने दाबी गर्छन् । साना जलविद्युत आयोजनाको लागि अनुमति पाउने हो भने भनेर शर्त खोज्छन् ।
बिचरा विद्युत प्राधिकरण लाइसेन्स दिंदा दिंदा हैरानमा परेर बिजोगमा परेको छ । किनभने लाइसेन्स लिनेको भीड मारामार छ भने विद्युत समस्या नै हटाउने गरेर काम गर्नको लागि लागिपरेर काम गर्ने कोही छैन । लाइसेन्स ओगटेका छन् बसेका छन् । यसरी हेर्दा काम गरेर खाने, पैसा कमाउने उद्देश्य राख्नेहरुका लागि विद्युत निकै टाउको दुखाई भएको छ, अथवा उद्यम गरेर परिवार पाल्नेहरुका लागि निकै समस्या भएको छ ।
तर काम गर्न नपर्ने भनेर ठगेर बस्ने समुदायका लागि भने यो वरदान जस्तै भएको छ । पढ्न अल्छी गर्नेहरुका लागि पनि यो आनन्दकै विषय बनेको छ । बिचरा राज्य भने आम्दानीविहिन अवस्थामा अर्थात आगामी भावी सन्तति पनि बिचराको अवस्थामा रहनुपरेको अवस्था छ । पर्यटन वर्ष मनाउने भनेर तयार परेर बस्ने समुदाय, व्यावसायी, अन्य सरोकारवाला भने जिल्ल । इमान्दारिताका साथ भन्ने हो भने सबैजना जिल्ल ।
कम्तीमा भएको सुविधालाई गुमाउनुपर्दा कति झमेला हुन्छ भनेर बहस त भएको छ । धन्य, कैयौं ग्रामीण क्ष्ाेत्र छन् जस्ले मट्टीतेल बाहेक ऊर्जाको विकसित रुप देख्नुपरेको छैन, उनीहरुका लागि भने हाइसन्चोकै अवस्था होला कि । कम्तीमा यो बहसमा उत्रेर समय खेर फाल्नु त परेन । - महेन्द्र ।
January 02, 2011 5:03 am
शान्तिमा सञ्चो तर तरिका उही
चर्चित हाँस्य कलाकार दीपक गिरीले एउटा कार्यक्रममा भन्दै थिए, 'मेरा केही साथीहरुका कारण मैले हवाइजहाजको उडान पनि छुटाउनुपरेको छ, त्यो पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नै ।' उनको भनाइअनुसार अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा दीपाश्री निरौलाले मेकअप गर्न ढिलाई गर्दा नेपाल आउने हवाइजहाज नै छुट्यो रे । उनले हँसाउन भनेका हुन् कि, साँच्चै भनेका हुन्, त्यो त फेरि सोध्नुपर्ने हुन्छ । तर यो घटनाले थुप्रै कुरा इंगित गरेको छ ।
पुस महिनामा काठमाण्डौं लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा अनि गाउँहरुमा वनभोज कार्यक्रम चल्छ । वनभोज कार्यक्रम हेरेर भन्न सकिन्छ, कुन ठुलो, कुन सानो अथवा कस्तो कस्तो भनेर । तर धेरै सार्वजनिक समारोहजस्तै वनभोज कार्यक्रममा समानता भने धेरै एउटै छन् । त्यसमध्येमा सबैभन्दा ठुलो समानता भनेको भनेको समयमा जम्मा नहुने अनि ढिला भयो भनेर हतपत गर्ने । त्यस्तै भयो स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थी वनभोज जान भनेर तोकिएको समयभन्दा करीब तीनघण्टा बढी ढिला गरे । केही विद्धानहरुले नेपाली विश्वविद्यालयमा पढ्ने तर व्यावसायिक ज्ञान आर्जन गर्न नसकेका ती विद्यार्थीलाई साँढे भनेझैं उनीहरु घुरघुर गर्दै सुतिरहे । बिचरा केही सहपाठीहरु जो समयमै काम गर्न खोज्छन् उनीहरु पनि अर्कोपटकदेखि समयमा काम गर्न हिच्किचाउँछन् ।
तर रमाइलो गर्न र बाँकी रहेको समयमा मस्ती गर्न भने कोही कम छैनन् । नुवाकोटमा पाइने स्ट्रबेरी रक्सी एउटा हातमा अर्को हातमा तरुनो/तरुनी समाएर बिस्तारै हल्लिएर नाच्न नेपाली विद्यार्थीहरु पनि कम छैनन् भन्ने कुरा यो महिनाका थानकोट, गोदावरी, ककनी, जस्ता ठाउँ मात्रै हेरे पुग्छ । जे भएपनि रमाइलो गर्न चाहिं गरेकै छन् । आखिर नयाँ वर्ष, पर्यटन वर्षलाई पर्खिनुपर्ने पनि त होइन नि ।
ओठमा ओठ नजोडेपनि आँखामा आँखा जुधाएर हातमा हात समाएर ती ठाउँका पार्कमा टहलिन कस्ले पो रोक्ने अब ती जोडीहरुलाई । चाहे विवाहित, चाहे अविवाहित पाश्चात्य संस्कृतिको लर्कोले समाइरहेछ, पुर्वीय संस्कृतिको मुटु भनेपनि हुने नेपालमा । तर ती पहाडी भेगहरुमा आउने र जाने कुनै निश्चित नभएको बादलजस्तो सम्बन्ध पनि हुने भएकोले कतिपय भने त्यसै निराश पनि देखिन्थे ।
देशामा संकट लागेको बेला पनि पिकनिक र रमाइलो गर्ने केही घटेपनि रोकिएको त होइन नि । कम्तीमा ग्रामीण क्षेत्रमा वनभोज र गेट टगेदर गर्दा सुरक्षा र डरको झन्झटबाट मुक्त हुनु पनि अर्कै अनुभव हुने रहेछ । - महेन्द्र ।
आफुले अरुलाई तुलना गर्दा
गाडीमा चढ्दा अरु यात्रुलाई नछोइकन चढ्ने, कसैलाई नधकेल्ने, वृद्धवृद्धा, महिला केटाकेटीलाई सिटमा बस्न दिनेसम्बन्धमा सरकारी स्तरमा दबाबस्वरुप केही नियम बनाइएपनि तिनको कार्यान्वयन भने निकै पछि परेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने ती सम्बन्धित ठाउँमा नियम पालना गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजिएका कुराहरु केवल मान्छे हँसाउनका लागि राखिएका हुन् कि भन्ने अलमलमा पर्नु स्वभाविकै हो ।
किनभने सडकबाटै सुरु गर्नुपर्दा, गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, अर्थात यात्रुको सुरक्षालाई लगभग ध्यानै नदिने जस्ता काम यातायात व्यावसायीहरुका लागि सामान्यजस्ता भइसकेका छन् । किनभने जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्ने पनि छैन, नियम बनाइएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि मौनजस्तै छ । अझ भनौं भने मौन नबसेर कारबाहीमा उत्रे पनि कसैले टेर्नेवाला छैन ।
एशियाकै केही साना देशहरुले चालीस वर्ष अगाडि सिकेका यस्ता कुराहरु कहिलेदेखि लागु हुने होलान् खै, भन्न गाह्रो छ । अब नैतिकता र शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने उच्च शिक्षा लिने थलो हरु नै दयनीय अवस्थामा छन् । कक्षाकोठामा विद्यार्थी जतिबेला आएर गएपनि भयो, समयको पत्तै छैन । शिक्षकहरु आए पनि भयो, नआएपनि भयो, जे गरेपनि भयो ।
आखिर कहाँ कस्ले नियमन गराउने हो कसैलाई थाहा छैन । राजनीति हो भनौं भने राजनीति गर्ने थलो आफैं कतिबेला रणमैदान बन्नेवाला हो थाहा हुन्न । विश्वविद्यालयबाट सिक्ने हो भनौं भने त्यहाँ राजनीतिले पनि बिगारेको छ भने सन्तति हरु सबै उस्तै । अभिभावकहरुले सिकाउने हो भनौं भने अभिभावकहरु नै अशिक्षाको घेरामा बाँच्न बाध्य छन् । अब कस्ले कस्लाई सिकाउने वा सिक्नेहरुले पनि कसरी सिक्ने । विकसित ठाउँमा घुमेका निश्चित मानिसहरुको घेरा निकै सानो छ ।
फेरि, विडम्वना के छ भने कुरा गर्नेले पनि विदेशकै गर्छन्, त्यो पनि त्यहाँका पृष्ठभुमिलाई उठाएर । आफ्नै परिवेशको कुरा गरेर त्यसलाई सुधार्ने उपाय पहिल्याए त राम्रै हुन्थ्यो नि । त्यो पनि सम्भव भएन । यो त सबै शुन्य शान्त जस्तै भयो, भाषा देखि लिएर सबै परिस्थिति नै । फ्रान्सेली विद्धान ज्याक्स डेरिडाले भनेजस्तै । त्यसो त समाधान नै नभएको पनि होइन होला नि, बरु आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने स्वामी विकासानन्दको भनाई नै उत्तम छ कि जस्तो छ । - महेन्द्र ।
December 12, 2010 5:53 am
पर्यटक बढ्दै जाँदा युवायुवतीको लश्कर घटेछ
काठमाण्डौंको वसन्तपुर लगायतका उपत्यकाका पाटन, भक्तपुर लगायत दरबार स्क्वायरमा हेर्न लायक भनेका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका कला र सभ्यताको जानकारी दिने संरचना नै हुन् । जे भएपनि ती स्थानमा पुग्दा के युरोप, के पुर्वी देशान्तर कोरिया, जापानबाट आएका होउन्, जहाँबाट आएपनि कला, संस्कृति रितिरिवाज हेरेपछि मख्खै पर्छन् ।
समयसमयमा यी स्थानलाई व्यवस्थित पनि पारिंदै लगिएको छ । धेरै सुधारका काम त छँदैछन् । उदाहरणका लागि फोहोरका थुप्रा नजिकै राखेर के गर्न खोजिएको होला । तिनलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने त सालाखाला एक महिनापछि सुरु हुने पर्यटन वर्षले धोखा खाने पक्का पक्की छ । हुन त विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका यस्ता महत्वपूर्ण ठाउँ नजिकको अवस्था सधैं नै राम्रो हुनुपर्ने हो । तर कम्तीमा यो अवधिलाई त धेरै ध्यान दिनुपर्‍यो नि ।
सरसफाइका लागि साधन स्रोत छैन भनौं भने राष्ट्रिय सभागृहमा चीनले दिएका आधुनिक मसिन अर्थात गाडीहरु छन् । तिनको इन्जिन नयाँ भएपनि नेपालको राजनीतिक मौसम अनि मोडरेट मौसममा आइसकेपछि खिया लाग्न थालिसकेको होला । भएका साधनस्रोतको सदुपयोग गर्न त सक्नुपर्छ नि । सडकका किनारमा प्लाष्टिकका डष्ट बिन फालेर जिम्मेवारी पुरा हुने हो भने त के नै भन्न सकिन्छ र ।
अब कुरा उही दरबार स्क्वायरको । दरबार स्क्वायहरुमा खासगरी पश्चिमेली र भारतीय पर्यटकहरुको संख्या बढेको छ । ट्राभल एजेन्सीमात्र होइन, गाइड, त्यहाँ क्युरियो पसल गर्ने अनि पस्मिनाको व्यापार अनि विभिन्न चित्रकलाको व्यापार गर्नेहरुको अनुहारमा कान्ति छाएको सजिलै महसुस गर्न सकिन्छ । तर कुनै समयमा युवायुवती टाँसिएर बसेको सही नसक्ने प्रहरी प्रशासनलाई भने हाइसन्चो भएको होला ।
हुन त अहिले पनि युवायुवती दरबार स्क्वायरका लुकेका कुनामा लट्पटिएर बसेका हुन्छन् । तर जाडोले भने यस प्रक्रियामा पनि असर गरेजस्तो छ । संख्या भने घटेको पाइन्छ । -यहाँ आपत्ति जनाउन खोजिएको होइन, यस्तो भएछ मात्र भन्न खोजेको) टाउको दुखाइ त जब साँझ परेपछि अहिले पनि हुँदो हो । दिनभरको तनावबाट मुक्त हुन मन्दिरका पेटीमा बसेर ध्यान गर्ने जति सबैजना प्रहरीको आँखामा ओठमा ओठ जोड्ने हुनसक्छन् भनेर एक पल पनि बस्न नदिने रहेछ । कम्तीमा जाडोको मौसममा प्रहरीलाई मन नपर्ने जोडीको संख्या घटेको बेलामा अरुलाई त बस्न दिनुपर्ने नि । - महेन्द्र ।
कतै नभएको सकस नेपाली खेलाडीहरुलाई
आमसञ्चार माध्यमको अनावश्यक चेपुवामा परे भन्ने गुनासो आएको छ, खेलाडीहरु । त्यो पनि एशियाडमा गएका खेलाडीहरुको नचाहिंदो आलोचना गरे भनेर बौद्धिक क्षेत्र अर्थात दर्शक, श्रोता, पाठकहरुबाट गुनासो आएको आयै छ । एकजनाले त भने कि एशियाड सकिएकोमा बडो खुशी लागेको छ भनेर । किनभने नेपाली खेलाडीहरले हारेको मात्रै खबर थाहा पाउँदा पाउँदा उनलाई थकाई लागेको रहेछ ।
हुनपनि यसपालि त्यस्तो भएको स्वीकार्नैपर्छ आमसञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुले । त्यो अधिकांश मिडियामा देखियो । यसअघि अन्तरराष्ट्रिय स्तरका खेल प्रतियोगिताहरुमा नेपाली आमसञ्चार माध्यमको पहुँच कम हुन्थ्यो । खेल भएको स्थलमा सीमित सख्यामा सीमित संचारमाध्यमका पत्रकार मात्रै जान्थे, त्यसकारण पनि सबै कुरा आउन्नथ्यो । वा ती पत्रकारहरुले आफैंले जानेर बुझेर असफलताको बारेमा कम चर्चा गर्न मन पराउँथे । तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो रहेन ।
एशियाडको अहिलेको संस्करणमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई पनि अपडेट गर्न सजिलो भयो । एउटा इन्टरनेटका आधारमा सबै जानकारी पाएपछि केही न केही छाप्नैपर्‍यो, बजाउनैपर्‍यो । यसक्रममा नेपालका खेलाडीले थुप्रै स्वर्णपदक जित्लान् भन्ने आशा पनि त थिएन नि । आशा भएको भए माहौल नै अर्कै हुन्थ्यो । बिचरा खेलाडीहरु ग्वान्झाउ जान पनि भिजा नपाएर भौंंतारिनुपर्ने थिएन ।
गल्ती त्यहींबाट सुरु भयो कि, नेपालका खेलाडीहरुले स्वर्ण पदकहरु जित्नुपथ्र्यो भनेर सोच राख्नु गलत थियो । यो सोच राख्नु गलत थियो किनकि, राजनीतिले पुरै बिथोलेको थियो खेलकुद क्षेत्रलाई । राजनीतिक खिचातानीका कारण को खेलाडी जाने भन्नेमा विवाद थियो, खेलकुद परिषद र ओलम्पिक कमिटिका हाकिमहरुमा पनि विवादित थियो । जसका कारण चरम विवाद भयो अनि खेलाडीमा असर पर्‍यो ।
हो, खेल्न नसक्ने अनि पदाधिकारीहरुलाई दोष दिने भनेर प्रश्न पनि उठ्न सक्ला । तर कुरा त्यसो होइन । खेलाडीले सुनका पदक जित्नका लागि त देशभित्र त्यसअनुसार वातावरण हुनुपर्‍यो नि । देशमा हानथाप बाहेक केही छैन । खेलाडीलाई खाजा खान पैसा दिन्न सरकारले । अनि तन्दुरुस्ती त कता हो कता होटलमा बसेर खाना खाने व्यवस्था नहुँदा कसरी खेलून नि खेलाडीले । अनि पदक आएन भनेर चिच्याउनुको कुनै तुक छैन । - महेन्द्र ।
जुवाको खालमा सबै बिर्सने
जुवा तास खेलेर रमाइलो गर्नका लागि अथवा व्यावसायिक रुपमै यसैलाई आफ्नै जीवनशैली बनाउनेका लागि निश्चित समयको याद हुन्न होला । उदाहरणका लागि व्यावसायिक रुपमा क्यासिनोमा समय बिताउनेहरुलाई के दशैं के तिहार अथवा अन्य खाली समय । त्यो बाहेक, हाल दशैंमा तास खेल्ने चलन पनि निकै बढेको छ ।
सामान्यतया तिहारमा लक्ष्मी देवीको पुजा गर्ने हुनाले त्यसबेला जुवा खेल्ने परम्परा छ । तर यो जुवा भन्ने चीज दशैंमा पनि भव्य खेलेर रमाइलो गर्ने संस्कृति परिवर्तन भएको छ । यो संस्कृति मन पराउने पनि होलान्, नपराउने पनि होलान् । जे भएपनि यो जुवाले चाडबाडको अर्कै रौनकलाई भने बिर्साइदिएको भान हुन थालेको छ । हुन त चाडबाडमा व्यक्तिपिच्छे आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् होला, तर त्यही भन्दैमा सबै दैनिक गतिविधिलाई बन्दै गर्न पनि त भएन नि ।
चाडबाडमा पनि बिदा नहुने क्षेत्रहरु सुरक्षा, सञ्चार मा काम गर्नेहरु यसको मजा मस्त भएका पाइन्छन् । दशैंतिहार आयो कि तास र जुवामा रमाइलो गर्ने एउटा माध्यम बनेको छ । यसको नशा बडो गजबको हुने त्यसमा संलग्नहरु बताउने गर्छन् । जब यो सिजन सुरु हुन्छ, कुन तास कस्को हातमा परेको अनि कस्ले कति जितेको भन्ने कुरा बाहेक अरु कुरै भएको पाइन्न ।
यस्तो अवस्थामा यसलाई रमाइलो भन्दा पनि समय कटाउने खेल बाहेक केही होइन भन्ने पनि छन् । किनभने तास खेल्नु जुवा नै हो, यसको नशाले अन्य समयमा पनि मानिसको ध्यान अन्यत्र लगिदिन सक्छ । यसैको कारण हुनसक्छ, विभिन्न महिला आन्दोलन, सामाजिक जनचेतनाका क्रममा पनि जुवातासले पुर्‍याएका सामाजिक बेथितिलाई बडो प्राथमिकताका साथ उठाइएको हुन्छ । वास्तवमा जति रमाइलो भनिए पनि यो अर्को नरमाइलो पक्ष हो ।
त्यसैले जुवा तासलाई एउटा बेथितितिर जाने उपायको रुपमा भन्दा पनि व्यवस्थित तरिकाले समाजमा बेथिति नल्याउने तरिकाले स्वस्थ मनोरञ्जनको माध्यमको रुपमा विकास गरिनु आवश्यक छ । कसैका लागि जुवा तास संस्कृति र रमाइलो पनि बन्न सक्छ भने कसैको घर न बास भएको पनि पाइन्छ नेपाली समाजमा । - महेन्द्र ।
यो दशैंमा दुर्गा देवीको भन्दा पनि खसीको महिमा बढी देखिएको छ । दुर्गा भवानीको पुजा गर्न, मान्यजनबाट टिका थाप्न राजधानी र देशका मुख्य शहरमा बस्दै आएका नेपालीजनहरु लर्को लागेर घरतिर हानिएका छन् । हवाइजहाज, सडक यातायातका साधनबाट गाउँ जान रमाइलो र साथसाथै भेटघाटका लागि पनि अवसर बनेको छ ।
कुरा छ खसीको । मान्छेजति शहरबाट घरतिर हानिएका छन् । गाउँमा खसीको र बोकाको महिमा नहुने कुरै भएन । किनभने खसी खानेजति त्यतै गएपछि भारतबाट झिकाएर पनि खान थालिएको छ । यतिमात्र नभएर चीनबाट पनि झिकाएर खसी खाने क्रम सुरु भएको खबर आइरहेका छन् । अझ भनौं भने खसीको अर्को स्वरुप च्यांग्रा । कृषिप्रधान देशमा खसीले नभ्याएपछि के गति होला ।
त्यसो त अन्य समयमा पनि खसी खाने क्रम अलि बढी नै हुन्छ । काठमाण्डौंको हकमा भन्ने हो भने अन्य समयमा बफेलोको मासु बढी खपत भएपनि दशैंतिहारम खसीले थेगिनसक्नु भएको छ । जति मान्छे गाउँमा गएपनि काठमाण्डौंमा बस्नेका लागि पनि खसीको खपत निकै भइसकेको व्यापारीहरु बताउँछन् । यसको उदाहरण अरु केही होइन, रातभरि भुस्याहा कुकुर भुक्ने राजधानीका सडकमा खसीको चिच्याएको सुन्न सकिन्छ, अलि ढिलासम्म घर नजाने सञ्चारकर्मी, प्रहरी लगायतका पेशाकर्मीहरुले ।
राति र बिहान खसी कराएको मात्र होइन, आमसञ्चार माध्यममा प्रस्तोता र श्रोताले पनि गर्ने कुरा दुर्गाभवानीको भन्दा पनि खसीको नै हुन्छ । यसलाई हेर्दा धर्मको कुरा भन्दा पनि खसी खाने संस्कृति विकास बडो नाटकीय तवरमा भएको छ । पछि पछि दशैंको सट्टा खसी पर्व पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । खसीको साथसाथै राँगाको पनि कम्ती महिमा छैन, तर अलि कम छ खसीको तुलनामा ।
यतिसम्म कि ठुला ठुला सेवाप्रदायकहरुले आफ्ना सामग्रीका विज्ञापन गर्न पनि खसीकै उपहार राखेर उपभोक्ताको चाहना बुझ्ने भरपुर प्रयत्न गरेका छन् । यसरी संस्कृति बन्दै खसीको महिमा त व्यावसायतिर पो पुगिसकेछ । तर मानिसले खसी खाने मात्र होइन, औकात नहुने अवस्थामा खसीले नै खाने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न । किनभने देखासिकी र तडकभडकले बिगारेको पत्तै हुन्न । - महेन्द्र ।
बिजुक्छे असम्भव कुरा सुनाएर मख्ख पार्छन्
भन्नै परेन नारायणमान बिजुक्छे रोहित नेपालका पुराना नेता हुन् । यिनलाई नेपाली राजनीतिको उकाली ओराली धेरै थाहा छ । भलै उनको सक्रिय राजनीति भक्तपुरमा सीमित भएको किन नहोस् । तर उनका भनाईले पाउने महत्व र उनले बोल्ने बोलीले तरंग भने ल्याइहाल्छ । नल्याओस् पनि किन । किनभने उनले अधिनायकवादी शासनको कुरा गर्छन् ।
अनेक खालका अधिनायकवादलाई पछिल्लो चरणसम्म आउनु पनि छ । अनि भएका भनिएका उपलब्धिलाई जोगाउने मनोकांक्षा हुंदाहुंदै पनि गुमाउन जानाजान खोज्नु अचम्मको कुरा छ । अझ बिजुक्छेले त कार्ल माक्र्सले सोचेको वा परिकल्पना गरेको समाजको कुरा गर्छन् । कुनै बेला अन्तरवार्ता दिए भने भन्न बेर लाउन्नन् कि त्यो बिस्तारै नेपालमा पनि आउँछ भनेर ।
यसको मतलब बिजुक्छेलाई व्यवहार भन्दा किताबको कुरा अलि बढी थाहा छ । किनभने कोरा किताबको कुरालाई उनी विश्वास गरेर लागु पनि त्यसरी नै गर्न खोज्छन् । त्यसो त यो पाइला पछ्याउने अरु पनि छन् । तर बिजुक्छेले भने सबै कुरा खुलस्त पारिहाल्छन् । हो, अहिलेको अराजकताको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न कि त सक्रिय राजसंस्था वा राष्ट्रपतिको अधिनायकवादी शासन लगाउनुपर्छ भन्ने प्रशस्त भेटिन्छन् । तर त्यसो सोच्न खोज्नु चुनौतीदेखि भाग्नुबाहेक के होला र ।
उनले भनिपनि हालेका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा आफू राष्ट्रपति शासनको पक्षमा रहेपनि राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यो आँट गर्न भने नसक्ने उनले आँककन गरे । लोकतान्त्रिक पद्दति भन्दै उनको पुरानो पार्टी महाधिवेशनमा लागिरहेका बेलामा प्रत्यक्ष शासनको कुरा पनि सुहाएन नि, बिजुक्छे कामरेड ।
राष्ट्रपति र सभामुखलाई अधिकारबिहीन बनाउँदाको परिणाम नकारात्मक बनेको बिजुक्छेको विचार छ । वास्तवमा रोहित कामरेडले भक्तपुरमा एकछत्र शासन गरेजस्तो सोच्न हुन्न । भक्तपुरमा पो सोझा नेवार समुदाय छन् र लामो समय सम्म पनि केही भन्न सक्दैनन् । देशका अन्य भागमा धेरै विचार भएका मानिस बस्छन् । प्रत्यक्ष शासन लादन खोज्ने हो भने मारिहाल्छन् नि, खै त बुझेको रोहित जी । - महेन्द्र ।
विशेषण मात्रै भन्दा पनि काम चाहियो
कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु खुबै पढ्छन् रे । त्यही भएर उनीहरुले जति विशेषण र व्यवहारको अनेक पक्षसँग तुलना कमैले गर्छन् । जान्नेले त्यही भन्छन् । यही क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको अर्को निर्वाचन अघिनै गतिरोध अन्त्य भई नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुने बताउँदै अन्य राजनितिक दललाई कुखुराको सज्ञा दिएका छन् ।
त्यसो त कुखुराको अर्थ जे पनि हुन्छ । गन्हाउने विशेषता भएको, खासै उड्न नसक्ने । अझ ब्रोइलर कुखुरालाई सम्झने हो भने त त्यो मासु खान मात्रै हो । त्यो कुखुरा राम्ररी हिंड्न पनि सक्दैन । त्यो बाहेक पखेटा भएको उड्न सक्ने, दुई खुट्टा भएको अनि त्यो बाहेक कुखुरालाई फुल पार्ने विशेषता भएको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । धन्न कुखुरासँग तुलना भएछ यसपालि । पटकपटक चुनावमा हार्दा पनि लाज नलागेको अवस्थामा दलका नेताहरुलाई कडा खालका विशेषता भएको भन्दै तुलना सुरु भइसकेको अवस्थामा कुखुरा त अलि नरम भएन र ।
जहाँसम्म कुखुराको विशेषण राजनीतिक दलको हकमा आएको छ, त्यसमा उडानको कुरा त राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न हुने सफलतामा निर्भर रहनेछ । पाङग्रो गुडाउने ढंग छैन हवाइजहाज उडान गर्छु भनेर पत्याउन पनि त पर्‍यो नि । जहाँसम्म प्रचण्डको हकमा उनले आफ्नै पार्टीमा र अन्य दलहरुमा समेत उत्साह ल्याउन खोजेको हो भने त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिनु नपर्ला ।
तर कसैले उड्छु नै भन्यो भने पनि पत्याइहाल्न सकिन्न । बरु उडेको देखेपछि मात्रै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त होला । कम्तीमा प्रचण्डले आफुलाई चीलको संज्ञा दिएर जगाएको उत्साहलाई पुरा गर्नु भने अहिलेको आवश्यकता होला । अरु भन्दा पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहमति जुटाउन देखिएको असफलतालाई सफलताको सिंढी सम्झेर अघि बढे उपयुक्त हुने थियो । बरु अरु दललाई कुखुरा नै भनेर होच्याउने काम भने नगरेकै भए वेश हुन्थ्यो । किनभने कुखुरा पनि फुल पार्ने, चील पनि फुल पार्ने, गन्हाउन पनि दुवै गन्हाइहाल्छन् । भन्छन् नि राजनीति फोहोरी खेल हो ।
माओवादीको हकमा चील बनेर उडनको लागि चिनियाँको पैसाको सहायता लिइन्छ भने त्यो पनि बेइज्जत र बर्बादीको कारक बाहेक केही हुन्न । भाग खान मात्रै सरकारमा जाने हो भने कामै छैन । मन मिल्ने दलहरु एक ठाउँमा आएर काम गरे भने त्यो जत्तिको उपयुक्त केही हुन्न । सांसद किन्ने कुरा त अन्तरराष्ट्रिय पैसा लिएर त के राष्ट्रिय स्तरमा एक लाखमा किनेपनि त्यो लज्जाजनक नै हुन्छ । - महेन्द्र ।
मनोरञ्जनसँगै फुर्सद नदिने खेल
निद्रा लागेर राति निदाउन खोज्यो दक्षिण अफि्रकाको बुबुजेलाको मौरी घुनघुनाएजस्तो आवाजले सुत्नै नदिने । रातदिन घरभित्रका सदस्यबीच फुटबलको कुरा । घरबाहिर गेटमा निस्क्यो, छिमेकीबीचको कुरामध्ये ६० प्रतिशत फुटबलको कुरा । सार्वजनिक यातायातको बिसौनीसम्म पुग्यो त्यहाँ पुग्दासम्म अघिल्लो रात भएका म्याचमा सम्मिलित खेलाडीमध्ये अधिकांशको नाम सुनिसकिएको हुन्छ भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
अब पालो आयो गाडीमा चढेपछि केके हुन्छ भन्ने । गाडीमा चढ्यो गाडीभाडा महँगिएको, दैनिक क्रियाकलापका अरु कुरा सुन्न पाइन्न, पाइन्छ त केवल विश्वकप फुटबलको कुरा । म्याचका खेलाडीको नाम सुनिसकेपछि त्यो दोहोर्‍याएर सुने पनि नसुनेपनि त्योबाहेक एक सामान्य नागरिकले अब सुन्न पाउने भनेको कुनकुन किक कसले कताबाट हानेको थियो जस्ता कुराले यात्रा फुटबलमय हुन्छ । यात्रा चाहे कार्यालयको होस्, चाहे आफन्त भेटघाट गर्न हिंडेको होस्, चाहे घुम्न हिंडेको होस्, कुनै न कुनै यातायातका साधनमा युवा, विद्यार्थी चढेकै हुन्छन्, उनीहरु माया पिरतीका कुरा कम फुटबलका कुरा धेरै गर्छन् ।
आमसञ्चार माध्यम, त्यसमा पनि विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको कुरा गर्ने हो भने त्यही फुटबलको समाचार छ । यी सबै थाहा पाउँदा त यस्तो लाग्छ कि, नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा अब फुटबलले नै समेटेको छ । तर त्यसो होइन, यसो भइरहँदा ए डिभिजन लिग नै मिलेमतोको शिकार भइरहेको समाचार पनि आइरहन्छ ।
कपडा बेच्ने पसलमा कपडा छन् भने विश्वका स्टार देशहरका जर्सी छन् । कपडाको गुणस्तर कस्तो छ भन्नेतिर नजाऔं, रङ र लोगो भने पक्कै हुनेछन् । अर्जेन्टिनाका लिओनेल मेसीको जर्सी नम्बर भएको जर्सी त बजारमा अभाव भइसकेको छ अरे । फाइनल खेल, मेसीले गोल हानेको बेलासम्म त बजारमा जति खोजे पनि पाइन्न होला उनको जर्सी । यस्तो भएपछि पनि । जर्सीकै प्रसंगमा कुरा आउँछ नेपाली टेलिभिजनमा जर्सी लगाएर कार्यक्रम चलाउने प्रस्तोता र विश्लेषकहरुको ।
भारतमा अपराध, पाकिस्तान र क्रिकेटको विषयले आमसञ्चार जगत तातेको छ भने नेपालमा फुटबलको विषयले आमसञ्चार माध्यम र तिनका समय भरिएका छन् । जान्नेहरु व्यापार पनि राम्रै छ भन्छन् विज्ञापनको । कम्तीमा विज्ञापन भने देखिएका छन्, पैसा दिएका छन् कि छैनन् व्यापारीहरुलाई नै थाहा होला । जे विश्वकप फुटबलले नेपालका अधिकांश भागलाई तताएको छ ।
फुटबल क्रेजले विद्यार्थीको पढाई डामाडोल, बैंकरहरुको काम लथालिंग, पत्रकारहरुको काम अलपत्र, कलाकारहरुको स्क्रीप्ट लेखन अनि अभिनय बेवास्ता गरिएको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । तर मनोरञ्जन भने भएकै छ भन्छन् भोग्नेहरु । -महेन्द्र ।
1 |2[ Next ] [ Last ] Add New Blog